Vaovao - Nahatratra tampon'isa vaovao ny laharan'ny orinasa 500 malaza an'ny vondrona BBMG an'ny taona 2020
Nanomboka ny 27 hatramin'ny 28 septambra lasa teo, ny "2020 China Top 500 Enterprises Summit Forum" izay natolotry ny China Enterprise Confederation sy ny China Ent Entursursurs Association dia natao tao Zhengzhou. Maherin'ny 1.200 ny olona, ​​anisan'izany ny mpandraharaha, manam-pahaizana malaza ary manam-pahaizana malaza, ary ny solontenan'ny fampahalalam-baovao mahazatra avy amin'ny orinasa 500 an-trano ambony, no nanatrika ny fivoriana ary niresaka momba ny fampandrosoana ny orinasa. Wang Zhongyu, filohan'ny fikambananan'ny orinasa Enterprise China ary ny Fikambanan'ny mpandraharaha ao Shina, dia nanome tatitra ifotony momba ny lohahevitra hoe "Miatrika fanamby amin'ny fiezahana hamorona vinavina vaovao ho an'ny fampandrosoana ireo orinasa lehibe".
BBMG dia mitana ny laharana faha-180 amin'ireo orinasa sinoa 500 ambony indrindra amin'ny taona 2020 miaraka amin'ny zava-bita miavaka, toerana 3 isan-taona isan-taona; laharana faha-74 amin'ireo orinasa mpanamboatra sinoa 500 ambony indrindra amin'ny taona 2020, toerana 4 isan-taona isan-taona; laharana eo amin'ireo orinasa lehibe miisa 100 ao amin'ny indostria mipoitra stratejika ao Shina amin'ny taona 2020 laharana faha-57, miakatra toerana 7 isan-taona, ary nihatsara avokoa ny laharana telo raha oharina amin'ny taona 2019. Manoloana tontolo iainana sarotra sy henjana, ny fifaninanana lehibe eo amin'ny orinasa BBMG dia nohatsaraina be, naneho ny zava-bitan'ny fanavaozana sy ny fanavaozana.
Ny lohahevitr'ity vovonana fihaonambe ity dia ny "Fampianarana milina vaovao: fampandrosoana ny orinasa lehibe amin'ny fanovana". Ny mpandray anjara dia nifantoka ihany koa tamin'ny "Forum momba ny fampandrosoana ny famokarana avo lenta", "ny fanavaozana ny milina vaovao ary ny fanokafana lalao vaovao, ary ny fanafainganana ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fampahalalam-baovao elektronika." Nifanakalo fifanakalozana tanteraka ny "Forum momba ny fampandrosoana ny indostrian'ny fiarovana ny fahefatra" sy ny "fananganana fifandraisana mirindra amin'ny orinasa eo ambanin'ny lamina fampandrosoana vaovao" sy lohahevitra hafa, ary niara-nidinika ny fomba fisainana stratejika hikolokoloana fahafaha-manao vaovao sy hanokafana lalao vaovao amin'ny fiovana izy ireo. . Ny BBMG dia handray ity fotoana ity hanohizana hampiroborobo ny kalitaon'ny vondrona avo lenta kokoa, ny fenitra avo lenta ary ny fampandrosoana maharitra kokoa, ary hiezaka hamorona toe-javatra vaovao ho an'ny fampandrosoana avo lenta an'ny vondrona.
Ny tokonam-baravaran'ny orinasa sinoa 500 ambony indrindra amin'ny 2020 dia 35,96 miliara yuan amin'ny fidiram-bola. Ireo orinasa voatanisa dia nahatratra fidiram-bola mitentina 86,02 trillion yuan, fitomboana 6,92 trillion yuan tamin'ny taon-dasa, ary tahan'ny fitomboana 8,75%.